I-CIR ethandekayo 017101-CNI-00004
U-Remo Ungumbungazi ovelele
Le ndlu itholakala edolobheni elincane laseMoscio, ingxenye kamasipala waseMalonno esigodini esiphezulu saseCamonica esifundazweni saseBrescia, amakhilomitha ambalwa ukusuka ePasso del Tonale nasePontedilegno nase-Aprica ski slopes.
Indlu ebanzi kakhulu futhi ekhanyayo esitezi esiphansi iqukethe indawo yokuhlala ethokomele okuhlanganisa negumbi lokuhlala lapho kunosofa we-peninsula onendawo ye-TV, konke kukhanyiswa iwindi le-panoramic elibheke engadini. Siphinde sithole indawo yekhishi ebanzi kakhulu, konke okuhambisana netafula elinwebekayo elinezihlalo eziyisi-6. Ngaphezu kwalokho, emnyango kukhona isitofu sokhuni esiphakathi nendawo eduze kombhede wesofa wesibili wabantu ababili kanye nesihlalo sobukhosi esine-footrest. Eduze kwekhishi kukhona indlu yokugezela encane yenkonzo efakwe kuphela izinto zokuhlanzeka.
Esitezi sokuqala siqukethe lokulala double eduze kwayo sithola lokulala elilodwa lapho kukhona imibhede olulodwa ezimbili, Ekugcineni yokugezela ifakwe wonke amasevisi kuhlanganise eshaweni ivulekile It has a ensimini ukanye izoso Zwiliwa zwa nga Matsheloni ongukuphela kwakhe ophilayo Igumbi ngempelasonto. Inombolo yamasonto onke.
Izilwane ezifuywayo zivunyelwe izinja ezincane mahhala, ngosayizi ophakathi, izindleko ezengeziwe ezinkulu ezizokhokhwa endaweni. Ukuxhumana kusuka kubangani abanoboya kwamukelekile